झापामा निगुरोले लियो ५० वर्षीया महिलाको ज्यान – Sandesh Press
झापामा निगुरोले लियो ५० वर्षीया महिलाको ज्यान
October 1, 2021 261
भद्रपुर नगरपालिका–१० स्थित चन्द्रगढी सामुदायिक वनमा उनी श्रीमान् सुकलाल मर्डीसँगै निगुरो टिप्न गएकी हुन् । निगुरो टिप्दैगर्दा हात्तीले सँु’ढले च्या’प्दा लतुमाईको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राकेश थापाले जानकारी दिनुभयो । घटनाबारे सुकलालले अस्थायी प्रहरी चौकी गरामनीलाई जानकारी गराएका थिए । लतुमाईको शव वनभित्रको सेती खोलाको पैनीमा फेला पारेको प्रहरीले जनाएको छ ।
Prevके तपाईलाई ग्यास्ट्रिकको समस्या छ ? अपनाउनुहोस् यी ६ घरेलु उपाय
Nextहार्दिक बधाई : जुन धरहराबाट ख’सेर भाग्यले बाचेकी थिन रमिला, त्यहीं जागिर पाउँदै !
हनिमुन मनाउन पोखरा पुगेेकी वर्षा शिवाकोटीले सार्वजनिक गरिन् यस्ता तस्बिर